Muujinta Iphone, Iphone Screen, Qaybaha Iphone - TC
TC waxay leedahay in kabadan 500 oo shaqaale ah iyo in kabadan 5,000 oo mitir laba jibbaaran oo aqoon kororsi ah imika, dhamaantoodna waa boodh la'aan, heerkulka joogtada ah iyo aqoon isweydaarsiga qoyaanka, oo ay kujiraan in kabadan 1,000 mitir laba jibbaaran 100 aqoon isweydaarsiyo aan lahayn boodh.
Shirkaddu waxay leedahay koox farsamo iyo maamul xoog leh, oo ay ku jiraan in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan kooxda R&D, waxaa jira in ka badan 50 injineero xirfadlayaal ah oo ka shaqeynaya, qalab iyo tayo.
Ma ogtahay haddii shaashadda asalka ah la beddelo marka repai ...
Caadi ahaan, waxaan inta badan la kulannaa xaaladda in shaashadda taleefanka gacanta uu shil ku jabo, kiisaska qaarkood waa jabaan dabool muraayad ah, qaarna shaashadda gudaha ma muujiyaan sidoo kale waa la jebiyey. Tan ...
Ma ogtahay horumarka mobilada? Runtii ch ...
BPM Era Marka laga hadlayo badeecadan, dadka qaar waa inay arkeen. Xaqiiqdii, si adag markaan u hadlo, sheygan lama wici karo taleefanka gacanta. Qalabkani wuxuu markii ugu horreysay soo muuqday qarnigii 20aad, whe ...
Ka dib saamiga shaashadda shaashadda taleefanka gacanta, ka dib ...
Cabbirku had iyo jeer wuxuu ahaa jihada muhiimka ah ee horumarinta shaashadda taleefanka gacanta, laakiin taleefanka gacanta oo in kabadan 6.5 inji ah kuma haboona hal gacan qabasho. Sidaa darteed, ma ahan wax kala duwan ...
Muxuu shaashadda sida ugu fiican ugu jeedaa dhinaca marka taleefanka gacanta ...
Aan ku waydiiyo horta su'aasha Taleefanka gacanta badanaa waxaa la saaraa miiska marka aan la isticmaalin, shaashadda ma kor baad u dhigaysaa mise shaashadda? Laakiin waad ogtahay waxa? Gali taleefanka gacanta ...
Had iyo jeer ku dheji tayada meesha ugu horeysa si adagna u kormeer tayada sheyga ee geeddi-socod kasta
TC waxay hirgelisaa nidaam maareyn tayo leh oo adag, waxay ku guuleysatay kalsoonida iyo ammaanta macaamiisha iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan, tayo sare leh iyo wax soo saar tayo leh.
TC waxay leedahay in kabadan 500 oo shaqaale ah iyo in kabadan 5,000 oo mitir laba jibbaaran oo aqoon kororsi ah imika, dhamaantoodna waa boodh la'aan, heerkul joogto ah iyo aqoon isweydaarsiyo qoyaan, oo ay kamid yihiin in kabadan 1,000 mitir laba jibbaaran 100 aqoon isweydaarsiyo aan lahayn boodh.